Izixhobo zokukhetha imifanekiso kwi-Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izixhobo zokukhetha imifanekiso kwi-Photoshop
Izixhobo zokukhetha imifanekiso kwi Photoshop ngobungcali kuzo zonke iiprojekthi zakho zemizobo, le nkqubo imnandi yokuhlela imifanekiso ine- ikhathalogu elungileyo yezixhobo ukukhetha iinxalenye zayo nayiphi na ifoto, nkqu zidibanise kwiziphumo ezilungileyo.
Funda uku khetha iinxalenye zomfanekiso kwaye ususe imvelaphi ngezixhobo ezilungileyo ze Photoshop ngendlela Kulula kakhulu. Sebenzisa ezi zixhobo zokukhetha ukwenza phucula ukuphinda uthinte ifoto yakho kunye nazo zonke iiprojekthi zakho zemizobo.
Siza kufunda ukusebenzisa oku kulandelayo izixhobo zokukhetha de Photoshop:
Siza kufunda oku kulandelayo iikhonsepthi kwi Photoshop:
Khetha iindawo ezithile zomfanekiso
Iindlela zokukhetha iifoto ezimnyama kakhulu okanye ezikhanyayo kakhulu
1 Izixhobo zokukhetha i-Photoshop
1.1 Izixhobo zeqhina
1.1.1 Isiporo semagnethi
1.1.2 I-lasso yePolygonal
1.2 Isixhobo sepen
1.3 Isixhobo se-wand wand
2 Izixhobo zokususa imvelaphi kumfanekiso
2.1 Nasiphi na isixhobo sokhetho
2.2 Isixhobo sokucoca umlingo
3 Iindlela zokukhetha iifoto ezimnyama kakhulu
Izixhobo zokukhetha Photoshop
I-Photoshop Unothotho lwe izixhobo zokukhetha izinto, nganye kuzo inokusetyenziselwa injongo eyahlukileyo eya kwahluka ngokuxhomekeka kwiimfuno esinazo, ayifani susa imvelaphi ngekholor inqwelo moya leyo susa enye ngeemiloYiyo loo nto kufuneka sazi ukuba yeyiphi nganye yazo. Esinye sezi zixhobo sinazo inqanaba elahlukileyo lobunzima.
Eziphambili izixhobo zokukhetha Photoshop Zizo:
Izibophelelo: Imagnethi, ipholoni, iluphu. | ubunzima obuphakathi
umlingo wand | ubunzima obuphantsi kakhulu
Iintsiba | ubunzima obuphakathi
Ngaphakathi kwesi sixhobo sifumana ezahlukeneyo ezintathu:
I-magnetic loop isisixhobo esisetyenziselwa yenza ukhetho oluntsonkothileyo usebenzisa amachaphaza amancinci Ezincanyathiselwe kwiindawo ezilinganayo zomfanekiso, kunjalo kulula ukuyisebenzisa kuba le nkqubo iyenza phantse izenzekele.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile khetha isixhobo se-lasso semagnethi ebekwe kwimenyu yasekhohlo, nje ukuba sikhethe oko, into elandelayo esiyenzayo kukuqala ukukhetha usebenzisa i usetyenziso lwenqaku.
Xa sisenza ukhetho, into eqhelekileyo kukuba isixhobo senza ifayile ye amanqaku ngokuzenzekelayo, ukuba kukho imfuneko yongeza inqaku Kufuneka nje senze konqakrazo ngempuku, le fomu iyasivumela tshintsha ulwalathiso lwamanqaku kwesi sixhobo.
Zonke izixhobo ze-lasso zinokhetho lokwenza ukhetho ngamalungu, Oku kuthetha ukuba sinokukhetha indawo kwaye ngesinye isixhobo okanye ngokufanayo, khetha enye indawo. Singalubona olo khetho kwimenyu ephezulu yaso nasiphi na isixhobo se-lasso.
Xa sifuna ukwenza ukhetho olukhawulezayo lweemilo ezintsonkothileyo Singasebenzisa isixhobo se-polygonal lasso, esi sixhobo sidala imigca ethe ngqo ngamachaphaza ngeziphumo ezikhawulezayo nezichanekileyo xa ukhetho lwethu lunzima kakhulu.
Ukusetyenziswa kwayo kulula, kuqala Sikhetha isixhobo size emva koko senze amanqaku.
Ukuba sifuna ukwenza ifayile ye- ukhetho lwencwadi Singasebenzisa isixhobo se-lasso, esi sixhobo siyasivumela khetha nayiphi na into ngokungathi ibrashil. Ukusetyenziswa kwayo kulula kuba sikhetha ngokulula isixhobo kwaye emva koko senza ifayile ukhetho ngesandla. Kutheni sisebenzisa esi sixhobo? kuba iyakhawuleza kwaye ichanekile ukuba sinokubetha kakuhle (okanye sisebenzisa ithebhulethi)
Isixhobo sokubhala siyaziwa kakuhle kwiinkqubo ze Adobe ngamandla ayo amakhulu okwenza zonke iindlela zendlela. Esi sixhobo siyasivumela yenza ukhetho oluchanekileyo xa sele siyazi kakuhle indlela isixhobo kakuhle. Ukusetyenziswa kwayo kulula kodwa ifuna ukuziqhelanisa esiya kuyizuza ekuhambeni kwexesha, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhetha isixhobo sepen kwaye uqale yenza amanqaku kumfanekiso wethu, ngalo lonke ixesha sisenza inqaku sinokuguqula ijika layo ukuba sigcina imouse icinezelwe. Kusenokwenzeka lungisa amanqaku emva kokuba zenziwe. Ngaphandle kwamathandabuzo, xa ulawula ukulawula esi sixhobo, uya kuba yingcali ngokwenza ukhetho kwi Photoshop.
Emva kokwenza ukhetho ngalunye lugcinwa kumaleko wendawo kwaye sinokuyikhetha kwakhona nanini na xa sifuna. Ukuba sifuna susa imvelaphi into esinokuyenza Guqula ukhetho ukukhetha yonke into ngaphandle kwento esiyikhethileyo ngesixhobo sokubhala, emva koko siyacima kwaye imvelaphi yethu iyasuswa.
Isixhobo se-wand wand
Ukuba sifuna yenza ukhetho olukhawulezayo lwemifanekiso engenantsokothe singasebenzisa isixhobo umlingo wand, ngokulula konqakrazo ayenzi naluphi na ukhetho.
Izixhobo zokususa imvelaphi kumfanekiso
Ngamaxesha amaninzi xa sikhetha into ebesiyifuna susa imvelaphi yomfanekiso wethu, susa imvelaphi kuye gcina kuphela isahlulo esikhethiweyo, ukwenza oku sinokukusebenzisa nasiphi na isixhobo sokhetho kwaye kamva ucime imvelaphi ngokhetho loku Guqula ukhetho, okanye sinokusebenzisa i intsini yomlingo de Photoshop.
Nasiphi na isixhobo sokhetho
Ukuba ufuna susa imvelaphi into onokuyenza kukukhetha umfanekiso kuqala kwaye ucime imvelaphi. Ukwenza oku kuya kufuneka wenze izinto ezimbini:
Khetha umfanekiso ofuna ukuwugcina (Sebenzisa nasiphi na isixhobo)
Sebenzisa ukhetho Guqula ukhetho
Uyila ukhetho lokuqala lweemilo emva koko uye kwimenyu ephezulu kwaye ukhangele ukhetho Guqula ukhetho, ke kuya kufuneka unike Deleter nayo yonke into iya kucinywa ngaphandle kwento oyikhethileyo.
Isixhobo sokucoca umlingo
Isixhobo sokucima umlingo siyasivumela cima imali ngonqakrazo olunye, Olu hlobo lwesixhobo siluncedo kakhulu xa sifuna ukucima Umbala osicaba ngaphandle kwenkcukacha ezininzi.
Iindlela zokukhetha iifoto ezimnyama kakhulu
Amaxesha amaninzi siza kubaleka iifoto ezikhanyayo kakhulu okanye ezimnyama kakhulu kwaye xa uzama ukwenza ukhetho kunzima kuthi, xa oku kusenzeka unokwenza amaqhinga amancinci ukuququzelela umsebenzi wokukhetha.
Into ekufuneka siyenzile kukuba yenza umaleko wohlengahlengiso lweejika kwaye uguqule umfanekiso ukuze uwenze ube lula okanye ube mnyama. Le nkqubo iyasivumela bona iinkcukacha ezingcono zomfanekiso ukwenza kamva inkqubo yokhetho nangasiphi na isixhobo. Emva kokwenza ukhetho, konke ekufuneka sikwenzile kukususa umaleko wokuhlengahlengisa ukuze umfanekiso wethu uhlale nesitayile saso sokuqala.
Zonke izixhobo zokukhetha Photoshop inokusetyenziselwa ukutshintsha ku yenza ukhetho oluntsonkothileyo kwaye wenze umsebenzi wethu ube lula. Kuya kufuneka sibazi bonke kwaye sazi ukuba basebenza njani ukuze benze njalo zisebenzise kakuhle kuzo zonke iiprojekthi zethu zexesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Izixhobo zokukhetha imifanekiso kwi-Photoshop
Susa izangqa ezimnyama kunye namabala eluswini ngeFotohop
Uyigugisa njani ifoto ngeAdobe Photoshop